Muxuu Eebbe iigu jawaabin tukashadayda, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
"Muxuu Eebbe ugu jawaabin ducadayda?",, Waa inuu jiro sabab macquul ah, sidaas ayaan had iyo jeer u sheegaa naftayda. Waxaa laga yaabaa in aanan ku baryin sida uu doonistiisa u yahay, taas oo shuruud u ah kitaabiga ah salaadda jawaabta. Waxaa laga yaabaa in aan wali ku haysto dembiyo noloshayda aanan ka qoomameyn. Waan ogahay in haddii aan ku sii jiro Masiixa iyo eraygiisa, in salaadda ay u badan tahay in laga jawaabo. Waxaa laga yaabaa inay shaki qabaan. Markii aan tukado, waxay mararka qaar dhacdaa inaan wax dalbado, laakiin waxaan shaki geliyaa inay tukashadayda tahay mid mudan in laga jawaabo gabi ahaanba. Ilaahay kama jawaabo salaadaha aan caqiidada ku xidhnayn. Waxaan u maleynayaa, laakiin mararka qaarkood waxaan dareemayaa sida aabbaha Markos 9,24, oo aad ugu yeera: "Waxaan u maleynayaa; caawin iimaankayga! » Laakiin laga yaabee in mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee salaadda cibaadada ay tahay inaan barto inaan si qoto dheer u aqoonsado isaga.
Markay Laasaros dhimanayay, walaalihiis Marta iyo Maria Ciise waxay ku wargeliyeen in Laasaros aad u bukooday. Ciise markaa xertiisii ​​ayuu u sharraxay in cudurkaan uusan geeri u horseedi doonin, laakiin uu u adeegi doono amaanta Ilaah. Wuxuu sugay laba maalmood oo kale ka hor intuusan ugu dambeyntii jidkiisii ​​u soo noqon Beytaniya. Haddaba Laasaros waa dhintay. Wicitaannada gurmadka ee Marta iyo Maria ayaa sida muuqata aan laga jawaabin. Ciise wuu ka warqabay inay tani caawinayso Marta iyo Maria iyo sidoo kale xertu inay bartaan oo ay ogaadaan wax aad u muhiim ah! Markay Marta markaa kahadashay waxay u maleeyeen inay tahay soo daaho, wuxuu u sheegay in Laasaros la sara kici doono. Waxay horeyba u fahamsan tahay inay jiri doonaan sarakicidda maalinta "Maalinta Dambe". Waxa ayan fahmin, si kastaba ha noqotee, in Ciise qudhiisu yahay sarakicidda iyo nolosha! Iyo in qof kasta oo isaga rumeeyaa uu noolaan lahaa xitaa hadduu dhinto. Waxaan ka akhrinay wadahadalkan John 11, 23-27: «Ciise wuxuu ku yidhi: Walaalkaa waa la soo sara kicin doonaa. Marta waxay ku tidhi: Waan ogahay inuu soo sara kici doono - wakhtiga sarakicidda maalinta ugu dambaysa. Ciise wuxuu ku yidhi, Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i rumaystaa, in kastoo uu dhinto, wuu noolaan doonaa. Kii kasta oo nool oo i rumaystaa weligii ma dhiman doono. Ma rumeysan tahay taas Waxay ku tidhi, Haah, Sayidow, waxaan rumeysanahay inaad tahay Masiixa oo ah Wiilka Ilaah ee dunida yimid. sidaa darteed ayay u rumaysteen inuu yahay Masiixa Eebbe soo diray. laakiin dadkii aawadood oo taagan aawadood, waxaan u leeyahay inay rumaystaan ​​inaad adigu i soo dirtay.
“Haddii Ciise maqli lahaa codsigii Marta iyo Maryan isla markii la keenay kadib, dad badan ayaa iska dhaafi lahaa casharkan muhiimka ah. Sidoo kale, miyaan isweydiin karnaa maxaa ku dhici doona nolosheena iyo koriinkeena ruuxiga ah hadii salaadaheena oo dhan si dhaqso leh looga jawaabo? Waxaan xaqiiqdii jeclaan lahayn xariifnimada Eebbe; laakiin runtii waligaa ha baran isaga.
Fikradaha Eebbe way ka sii fogaadaan kuwayaga. Wuxuu ogyahay waxa, goorta iyo inta qof u baahan yahay. Wuxuu tixgeliyaa dhammaan baahiyaha shaqsiyeed. Haddii uu buuxiyo codsi aniga ii gaar ah, macnaheedu maahan in fulintu sidoo kale u fiicnaan laheyd qof kale oo weydiistay isla wixii.
Marka haddii Malachi soo socdaa dareemo in Ilaah na dejiyay salaadda xun, ka dib waa inaan aragnaa meel ka fog wixii aan ka fileynay iyo kuwa dadka kale ee aadanaha ah. Sida Marta, aynu u qaylinno rumaysadkeenna Ciise, oo ah Wiilka Ilaah, oo aan sugno qofka garanaya waxa inoo wanaagsan.